चेतावनी « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
उपमेयरमा कांग्रेसकै कल्पना माया पाख्रिन ६७१ मतान्तरको विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ८ हजार ८५० मत पाउँदा प्रतिस्पर्धी एमालेकी सन्सरीमाया थिङले ८ हजार १५९ मतमात्र प्राप्त गर्नुभयो ।
डा. गोविन्द के.सी.ले सरकारसमक्ष राखे ५ बुँदे माग, पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द के.सी.ले फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ । यसअघि सरकारसँग भएकामध्ये कतिपय सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. के.सी.ले माग पूरा नभए सत्याग्रह
अमेरिका र जापानमा सुनामीको चेतावनी
काठमाडौं । दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा भएको ज्वालामुखी विष्फोटको असर अमेरिका र जापानमा पनि पर्ने देखिएको छ । यी दुई राष्ट्रले टोंगा विष्फोटपछि सुनामीको चेतावनी दिएका छन् । अमेरिका र जापानले
रुसलाई अनावश्यक चासो नराख्न अमेरिकाको चेतावनी
ह्वाइट हाउसका अनुसार बाइडेन र जेलेन्स्कीले संकटलाई सम्बोधन गर्न आगामी कूटनीतिक बैठक आह्वानको तयारीबारे छलफल गरेका छन् ।
रुसलाई बेलायको चेतावनी, ‘युक्रेनमाथि हमला गरे गम्भीर आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्छ’
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत मंगलबार उक्त क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्ने सम्बन्धमा भर्चुअल बैठक भएको थियो ।
अब पनि नसुध्रिए कांग्रेस समाप्त हुन्छ : गगन थापा
थापाले यो महाधिवेशनपछि कांग्रेसको सदस्यता कहिल्यै नलिएका १५ लाख नयाँ मान्छेलाई पार्टीसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वैज्ञानिकले अहिले प्रयोग भइरहेका कोरोना खोप यो भेरियन्टमा पनि प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।